KLIA အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Travel » KLIA အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း
KLIA အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း
Posted by မောင်ဆန်း on Sep 21, 2011 in Travel | 23 comments
KLIA ဆိုတာ Kuala Lumpur International Airport ပါ ၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မြန်မာတွေ တတိယအများဆုံးရှိတဲ့ နိုင်ငံက လေဆိပ်အကြောင်း ပြောရမှာ နဲနဲတော့ တွန့်မိပါတယ် ဒါပေမဲ့ ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ ရန်ကုန်လေဆိပ်ဆို ဧည့်သည်သွားကြိုလို့ ၊ ကိုယ်တိုင်ခရီးသွားလို့ ရောက်ဘူးပေမဲ့ ဘယ်နေရာကဘာဆိုတာ သိပ်သိတာမဟုတ်ဘူး ကွာလာလမ်ပူလေဆိပ်ကို ရောက်ဘူးတဲ့ ရွာသားတွေလဲ ဖြတ်သွားရုံဆို သတိထားမိမှာ မဟုတ်ဘူး အဲဒါကြောင့် အချိန်နဲနဲယူပြီး မရောက်ဘူးသေးတဲ့သူ ရောက်ဘူးသော်လည်း သတိမထားမိသေးတဲ့သူတွေအတွက် ဒေသန္တရဗဟုသုတ အလိုငှာ တစ်စေ့တစ်စောင်း ငဲ့စောင်းလို့ကြည့်လိုက်ပါတယ်နော…
ကွာလာလမ်ပူလေဆိပ်က အရှေ့တောင်အာရှမှာ အကြီးဆုံးပါ ဘန်ကောက်လေဆိပ်ထက် ကြီးတာအပြင် ခရီးသည်တွေအတွက် အသုံးပြုရတာ ပိုအဆင်ပြေပါတယ် မြို့နဲ့ ၃၁ မိုင်ဝေးတယ် ၊ လေဆိပ်ကြီးကို တနှစ် ခရီးသည် ၃၅ သန်း၊ ကုန် ၁.၂ သန်း အသုံးပြုနိုင်အောင် စီစဉ်ပြီး တည်ဆောက်ခဲ့ကြတာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃.၅ ဘီလီယံ ကုန်ကျခဲ့ပါတယ် ကောင်းကောင်းလိုချင်ရင် အခုလို ထိုက်တန်တဲ့ ကုန်ကျမှုတော့ ရှိရပါမယ် ၊ ၁၉၉၈ မှာဖွင့်ပါတယ် ၂၀၁၀ မှာ အသုံးပြုတဲ့ ခရီးသည်က ၃၄ သန်းကျော်ရှိပါတယ် ခရီးသည် အ၀င်အထွက် ပုံမှန်ရှိနေပေမဲ့ ခရီးသည်တွေ ပြည့်ကျပ်နေတာ ရှုတ်ထွေးနေတာမျိုး မတွေ့ရပါဘူး လေဆိပ်မှာ Main terminal ရှိသလို Satellite terminal တွေလဲ ရှိပါတယ် Main terminal က သူတို့ မလေးလေကြောင်းလိုင်းတွေပဲ ကပ်ပါတယ် မြန်မာအပါ တခြားလေကြောင်းလိုင်းတွေက Satellite terminal မှာပဲ ကပ်ရပြီးတော့ ရထားလေးနဲ့ Main terminal ကိုဆက်လာရပါတယ် လေဆိပ်မှာ အထပ် ၅ ထပ် ရှိပါတယ် အထပ် ၃ က ဆိုက်ရောက် (arrival) ၊ အထပ် ၅ က ထွက်ခွာ (depeature) ပါ တစ်ထပ်ချင်း ကြည့်ရအောင်နော်….
လေဆိပ်နဲ့ satellite terminal တွေရဲ့ပုံ ( credit: mygreentech.blogspot.com)
ပထမထပ် က မြေညီထပ် ပါ ခရီးသည်တွေ မြို့ထဲကို သွားဘို့ မြို့ထဲကလာဘို့ စီးလို့ရတဲ့ ဘတ်စ်ကား ရထား အားလုံးက ပထမထပ်မှာပဲရှိပါတယ် ကားဂိတ်က လေဆိပ်ရှေ့ ကပ်ရပ်မှာရှိပြီးတော့ ဘူတာကြီး၊ မြို့ထဲ တွေကိုသွားချင်ရင် ရင်းဂစ် ၁၀ ပဲပေးရပါတယ် မြို့ထဲကို တစ်နာရီကျော်ကျော်လောက် စီးရပါမယ် ကားဂိတ်ရဲ့အပေါ်နဲ့ လေဆိပ်ရှေ့ဘက်တွေမှာ အထပ်မြင့်ကားပါကင်တွေ ရှိပါတယ် ၊ အမြန်ရထားကတော့ ရင်းဂစ် ၃၀ ပါ နာရီဝက်လောက် စီးရပါမယ် လေဆိပ်အပြင်က လာတဲ့သူတွေက ရထားဆီ တန်းသွားလို့မရပဲ Level2ကို တက်ပြီး ပြန်ဆင်းမှ ရောက်တယ် လေဆိပ်ထဲကတော့ Level5ကနေ Level 1 ထိ တိုက်ရိုက်ဆင်းလို့ ရပါတယ် လေဆိပ်အပေါက်ဝ ရှေ့မှာ ဟော်တယ်တွေက လာကြိုတဲ့ shuttle bus တွေ ရပ်ပါတယ် ၊ ကားကြီးတွေ ၀င်လာတယ် ခရီးသည်ချတယ် ပြန်လိုက်မဲ့ခရီးသည် တင်တယ် ပြန်ထွက်တယ် တရွှီးရွှီးမှုတ်နေတဲ့ ရဲ မရှိဘူး လမ်းပိတ်ရပ်တာမရှိဘူး ယာဉ်ဝင်ခကောက်တာ မတွေ့ပါဘူး လေဆိပ်ကြီးတစ်ခုလုံး အမှိုက်တွေရှုပ်နေတာ နံစော်နေတာ မရှိဘူး လေဆိပ်တစ်ခုလုံး မှာ Level 1 ကနေ Level5အထိ အဆင့်ဆင့် တက်သွားလို့ ရတဲ့ စက်လှေကာ ၂ စင်း နဲ့ ဓါတ်လှေကား ၄ စင်းရှိပါတယ် ၊ မုန့်နဲ့စားသောက်စရာ ၀ယ်လို့ရတဲ့ ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ရှိပါတယ်…
ညာဘက်ခြမ်က ကားပါကင် ၊ အောက်ထပ်မှာ ဘတ်စ်ကားဂိတ်ရှိတယ်
မြို့ထဲ သွားလို့ ရတဲ့ ဘတ်စ်ကားဂိတ်
KLIA Express စီးရတဲ့နေရာ
KLIA Express (credit: www.1malaysiatravelblog.com)
ဒီအထပ်ကတော့ စားသောက်ဆိုင်ခန်းတွေ ရှိတဲ့အထပ်ပါ ယိုးဒယား၊တရုတ်၊မလေးအစုံရပါတယ် ဈေးက အကြမ်းမျဉ်း ၇-၁၀ ရင်းဂစ်လောက် ရှိပါတယ် အဲဒီမှာ မြန်မာအလုပ်သမား ၂ ယောက်ရှိတဲ့ Littele Taiwan ဆိုတဲ့ ဆိုင်လေးလဲရှိပါတယ် ဒီအထပ်ကနေ တစ်ဖက်က (ဘယ်)ကားပါကင် ကျန် တစ်ဖက်က(ညာ) panpicific hotel ၊ ကားဂိတ်၊ ကားပါကင် တို့ကို တိုက်ရိုက်သွားနိုင်တဲ့ တံတားရှိပါတယ်
ဒီအထပ်ကတော့ ဆိုက်ရောက်အထပ်ပါ အထပ်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ ဘယ်ဘက်အခြမ်းက ပြည်တွင်းဆိုက်ရောက် ညာဘက်အခြမ်း အကျယ်ကြီးက ပြည်ပဆိုက်ရောက်ပါ လေယာဉ်ပေါ်ကဆင်း လ၀က ကိုဖြတ် ပစ္စည်းရွေးပြီးလို့ထွက်လိုက်တာနဲ့ (မြေဖြူခြစ်ခံရတာ ၊အကောက်ခွန်ဖြတ်ရတာ မရှိပါဘူး) အပြင် ဧည့်သည်တွေ လာကြိုတဲ့ meeting point ရောက်ပါတယ် ဖုံးကဒ် တစ်ခါတည်း ၀ယ်လို့ရပါတယ် ၂၅ ရင်းဂစ် ဖိုးဝယ်တာ sim card ပါတယ် balance က ၈ ရင်းဂစ် ရှိပါသေးတယ် Level3မှာ လေဆိပ်ထဲက အပြင်ထွက်တာနဲ့ တက်စီကားတွေက စနစ်တကျ တန်းစီစောင့်နေပါတယ် ဒါကြောင့် တက်စီနဲ့သွားချင်ရင် အပြင်ထွက် ရထား၊ဘတ်စ်ကားနဲ့ သွားချင်ရင် အောက်ဆုံးထပ်ထိ ဆင်းရပါမယ်..
အပြင်ဘက် တက်စီငှားလို့ရတယ် ၊လမ်းက အပေါက်အပြဲမရှိ ညီညာပြန့်ပျူးနေတယ်
အလကားနှိပ်လို့ ရတဲ့ ကုလားထိုင် ၄ လုံးရှိတယ်
ဒီအထပ်ကိုတော့ အပြင်ဘက်ခြမ်းမှာ ထပ်ခိုးလေးလို လုပ်ထားပါတယ် levlel3ကနေ စက်လှေကားတွေ နဲ့ တက်လို့ရအောင် လုပ်ထားပါတယ် လေကြောင်းလိုင်းရုံးခန်းတွေ ရှိပါတယ် စားသောက်ဆိုင်နဲနဲရှိပါတယ်
Level3ကနေ4ကို အဲဒီ စက်လှေကားလေးနဲ့ တက်ရတယ်
ဒီအထပ်ကတော့ Deperture ပါ လေဆိပ်ကြီး တစ်ခုလုံးမှာ ကျွန်တော် သဘောအကျဆုံးအထပ်ပါ အထပ်ကြီး တစ်ခုလုံကို မှန်တွေနဲ့ကာထားတယ် အမိုးကနေအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရအောင် လုပ်ထားတယ် အဆောက်အဦ တစ်ခုထဲ ရောက်နေသလို မဟုတ်ဘဲ လွင်ပြင်ကျယ်ကြီးထဲ လျှောက်နေရတဲ့ ခံစားမှုမျိုးပဲ မြင်ရတာ ခန့်ငြားသလို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လဲ တော်တော်လေးကိုက်ပါတယ် အောက်ကနေ ဓါတ်လှေကား၊စက်လှေကားတွေနဲ့ တက်လာတာ နဲ့ အရင်ဆုံး လေကြောင်းလိုင်း ကောင်တာတွေ တွေ့ရပါမယ် ခရီးသွားမဲ့သူက လေကြောင်းလိုင်း ကောင်တာတွေမှာ check in လုပ် လ၀က ကို လက်မှတ်ပြ ၄ ထပ်ကို စက်လှေကားနဲ့ဆင်း အဲဒီတော့မှ လ၀က ကောင်တာဖြတ် ပစ္စည်းကို x-ray ဖြတ် satellite terminal ဘက်သမားဆို ရထားလေးနဲ့ ဆက်သွားပေါ့ ဒါကတော့ ခရီးသွားမဲ့သူ အတွက် ၊ လိုက်ပို့ချင်တဲ့သူ ဆိုလဲ ကိုယ့်ဧည့်သည် ၄ ထပ်ကိုဆင်းသွားတာ လ၀က ကောင်တာ ဖြတ်နေတာ မြင်ရမယ် သူက ၄ ထပ် ကိုယ်က ၅ ထပ် သူ x-ray ဖြတ်တာလေး အပေါ်က လိုက်ကြည့်လို့ရသေးတယ် ၅ ထပ် ထိပ်ဘက်ကို ဆက်လျှောက်သွားရင် ကွက်လပ်ကျယ်ကြီးရှိမယ် satellite terminal ဘက်ကို သွားတဲ့ ရထားတွေ မြင်ရမယ် ဧည့်သည်တစ်ယောက်သွားရင် ၅ ယောက်လောက် လိုက်ပို့ချင်တဲ့ မြန်မာ့စရိုက်နဲ့ ကွက်တိပဲ ဒီမှာတော့ လိုက်ပို့တဲ့သူရယ်လို့များများစားစား မတွေ့ရဘူး ၅ထပ် မှာ ငွေလဲတဲ့ နေရာရှိတယ် ကလေးတွေ ကစားဘို့နေရာရှိတယ် လူကြီးတွေ စားဘို့ ၀ယ်ဘို့ ဆိုင်လေးတွေရှိတယ် ဒါပေမဲ့ အထဲဝင်သွားမှ တကယ်ဝယ်လို့ ကောင်းတဲ့ဆိုင်တွေက ရှိတာ…
ဒီလို တန်းစီ လက်မှတ် နဲ့ ပတ်စ်ပို့ပြ ၄ ထပ်ကို ဆင်း
မြင်ရတဲ့ စက်လှေကားလေးက ဆင်း (အဲဒါမျိုး ၃ ခုရှိတယ် ဒါက ညာဘက်အစွန်ဆုံး စက်လှေကား)
အောက်ရောက်ရင် လ၀က ကောင်တာမှာ တန်းစီ
လိုက်ပို့တဲ့ သူက ၅ ထပ်မှာတင် ရှေ့က လမ်းလေးအတိုင်း ဆက်သွားလို့ရတယ်
အပေါ်ကနေ x-ray ဖြတ်နေတဲ့ ဧည့်သည်ကို မြင်နေရသေးတယ်
လေယာဉ်ရုပ်ကြီးတွေ ရှိတဲ့နေရာကိုလဲ မြင်ရတယ်
ဒီနေရာထိ သွားလို့ရတယ် အပြင်ကိုကြည့်လို့ရတယ်
Main terminal ကနေ Satellite terminal ကို ဒီလို ရထားလေးနဲ့သွားတယ်
Satellite terminal ကနေ ခရီးသည်တွေ ပြန်ခေါ်လာတယ်
သူတို့လဲ ဒီလို သွားလာနေတာပဲ
ကလေးတွေ ဒီမှာ ဆော့လို့ရတယ်
အရင်က ခရီးသွားရင် ဟိုငေး ဒီငေး ဟိုဓါတ်ပုံရိုက် ဒီဓါတ်ပုံရိုက် လောက်ပဲ လုပ်ဖြစ်ပေမဲ့ ဒီရွာသား ဖြစ်လာပြီးတော့မှ တစ်ခုခုဆို စူးစူးစမ်းစမ်းလေး ကြည့်မိ မှတ်မိလာတာ ရွာသားဖြစ်ရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူး လို့ ပြောရမယ်ထင်တယ် ၊ မလေးကို လာတဲ့နေ့က ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ အိမ်သာ ခဏ၀င်တုန်း မလေးကို သွားမဲ့ ရွှေကိုယ်တော်ချော နှစ်ယောက် ၀င်လာတယ် ၀န်ထမ်းလေးကို ကျွန်တော်တို့ အပေါ့သွားချင်လို့တဲ့ ၀န်ထမ်းက နောက်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကို “အိမ်သာထဲလာပြီး အပေ့ါသွားချင်လို့တဲ့ ”ဆိုပြီး လှောင်ရီ ရီတယ် သူတို့က ဘယ်လောက်ထိ တော်နေ တတ်နေ ဗဟုသုတ ပြည့်စုံနေလို့ မသိတဲ့သူကို လှောင်ရတာလဲလို့ ဒေါသဖြစ်မိရတယ် ၀န်ထမ်းတွေ အလုပ်က ၀န်ဆောင်မှုပေးဘို့ အိမ်သာသန့်ရှင်းအောင် လုပ်ဘို့ သူ့တို့တာဝန်ပဲ အိမ်သာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေလို့ သူတို့ကိုအထင်အမြင်သေးစရာ လှောင်စရာမလိုသလို သူတို့ကလဲ သူများကိုလှောင်ပြောင်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး ဒီလိုအခြေအနေနဲ့ သူတစ်ပါးနိုင်ငံသွားမဲ့ ကိုယ့်အမျိုးတွေ အတွက်လဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ် ၊ ဒီပို့စ်လေးကို ရေးဖြစ်ဘို့ တွန်းအားတစ်ခုက ဒီရက်ထဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဟံသာဝတီလေဆိပ်ပြန်တည်ဆောက်တော့မယ် ဆိုတဲ့ အသံတွေ ထွက်လာတယ် ဆောက်မဲ့ဆောက်ကတော့ နောင် အနှစ် ၅၀၊၁၀၀ လောက် အထိ မျှော်မှန်းပြီး စနစ်တကျလေ့လာ သေချာအကုန် အကျခံ ဆောက်စေချင် တာပါ မြန်မြန်ပြီးတယ် ပိုက်ဆံအကုန် သက်သာတယ် ကြွေးကြော်ပြီး သုံးတော့မှ အဆင်မပြေတာတွေ တွေ့ရင် ဘွာတေးလုပ်လို့မရတော့ဘူး…၊ ဟိုမြေညီထပ်ကနေ အပေါ်ဆုံးထပ်အထိ သွားလာတာ ဓါတ်ပုံရိုက်တာ ဘာဖောင်မှ ဖြည့်စရာမလိုဘူး ဘယ်သူကို ခွင့်တောင့်စရာမလိုဘူး သူတို့ဆီမှာ ရော လုံခြုံရေးဘယ်လိုလုပ်ကြလဲ ဒါလဲ အတုယူစရာပါ လေဆိပ်အထပ်တိုင်းမှာ စစ်သားတွေ ရဲတွေ သေနတ်တွေနဲ့ လျှောက်သွားနေတယ် သူတို့ကို ဘယ်သူမှ ဂရုမစိုက်ဘူး သူတို့ရှိလို့လဲ ဘယ်သူမှ အနှောက်အယှက်မဖြစ်ကြဘူး…
KLIA အကြောင်းတော့ နဲနဲတို့ထိ ပေးလိုက်ပါပြီ ပြီးပြည့်စုံတာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး အမှားတွေ၊လိုအပ်နေတာတွေ တွေ့ရင် သိတဲ့သူတွေ ကိုဇော်မင်းတို့လို မလေးရောက် ရွာသားတွေက ဖြည့်စွက် ပြင်ဆင်ပေးစေချင်ပါတယ် မြင်စေချင်လို့ ဓါတ်ပုံတွေ တင်ပေးလိုက်ရပေမဲ့ မြန်မာပြည်က ကွန်နက်ရှင်နဲ့ ကြည့်တဲ့သူတွေကို ဒုက္ခပေးသလိုများဖြစ်နေမလားလို့လဲ အားနာမိတယ် ၊အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်……
ခမ်းနား ထည်.၀ါ လှပါတယ်ဗျာ… အပင်လေးတွေ.လည်းရှိတယ် အဆောက်အဦးတွေ.ကလည်း ကြီးကျယ် ခမ်းနားပါတယ် ကျွန်တော်တို.နိုင်ငံမှာလည်း ဒီလို.မြင်ကွင်းမျိုး ဘယ်တော. မှ မြင်ရပါလိမ်…
အရမ်းစနစ်တကျတည်ဆောက်ထားတာ ကောင်းလိုက်တာ မြန်မာပြည်ကိုဒီလိုအဆောက်အအုံးဒီလိုမြင်ကွင်မျိုးမသေခင်မှာမြင်မှမြင်ရပါမလားမသိတောပါ……
နောက်တပ်မိုးပွင်ကသက်တန်အရဆို နှစ်လေးဆယ် လေးဆယ်ငါးနှစ်လောက်နေနိုင်ပါသေးတယ်…
သူများနိုင်ငံ တိုးတက်နေတာမြင်ရတော့ အားကျတယ်။ ကိုယ့်ဆီမှာ ဒါမျိုးဘယ်တော့တွေ့ရမှာလဲ မျှော်နေတာထက် အဲလိုနေရာမျိုးမှာ သာသာယာယာ သွားနေချင်လိုက်တာလို့လဲ တွေးမိတယ်(တခါတရံပေါ့)။
ဒါကလည်း ခေါင်းဆောင်ကောင်း (Dr. Mahatir) ရှိလို့ သူ့နိုင်ငံသားတွေ စံရတာပါ…ကျုပ်တို့ဆီမှာလည်း သူ့လို ခေါင်းဆောင်ကောင်း သာရှိခဲ့ရင် အခုလောက်ဆို ရန်ကုန်-mdy ကို Bullet Train နဲ့ ခရီးသွားနေလောက်ပြီ…..
ကျွန်တော်ဆို KLIA မှာ မနက် လေယာဉ်မှီဖို့ တညအိပ်ဖူးတယ်…ဘာလုပ်နေလည်း ဘယ်သူမှ လာမမေးဘူး..underground floor မှာ airport staff တွေ စားတဲ့ စားသောက်ဆိုင် တစ်ခုရှိတယ်..အပေါ်ဆိုင်တွေ
nozomiပြောမှဘဲ KLIAလေဆိပ်ကအရှေ့တောင်အာရှမှာအကြီးဆုံးဖြစ်မှန်းသိတော့တယ်။ ထင်တော့ထင်သား ဒါပေမဲ့ ကိုယ်စင်္ကာပူသွားတုန်းကသူငယ်ချင်းက စကာင်္ပူလေဆိပ်ကပိုကြီးတယ်ဆိုလို့ ကိုယ်လဲစဉ်းစားနေတာ။ အခုတော့ရှင်းသွားပြီပေါ့။ ဗမာပြည်ကလေဆိပ်တွေလဲ အဲလိုဖြစ်စေချင်တယ်။ လုံခြုံရေးဆိုတာကတော့ ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်တို့အတိုင်း ကိုယ့်လုံခြုံရေးကိုယ်ယူပေါ့. ။တခါလား ကြားလိုက်သေးတယ်။ ကိုယ်တို့လေဆိပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘဲ ပိုက်ဆံအိတ်လုပြေးတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။
aungnng87 မန်းတာလေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်တော်ရေးတာ မှားသွားတဲ့ အတွက် ပြန်ပြင်ချင်ပါတယ်
KLIAလေဆိပ်က အရှေ့တောင်အာရှမှာ အကြီးဆုံး မဟုတ်ပဲ အကြီးဆုံးတွေထဲက တစ်ခု လို့ ရေးရမှာပါ အဲဒီအတွက် တောင်းပန်ပါတယ်နော
ချန်ဂီ က ၂၀၁၀ မှာ ခရီးသည် ၄၂ သန်း ၀င်ထွက်ခဲ့တာမို့ ချန်ဂီက ပိုကြီးတယ်ပြောရမလားမသိ
အဲဒီ လေဆိပ်နှစ်ခု ရဲ့ တစ်ခုချင်း နှိုင်းယှဉ်ချက်လေး အဆင်ပြေရင် ထပ်ထည့်ပေးပါမယ်
ကျွန်တော်ဆို KLIA မှာ မနက် လေယာဉ်မှီဖို့ တညအိပ်ဖူးတယ်…ဘာလုပ်နေလည်း ဘယ်သူမှ လာမမေးဘူး..underground floor မှာ airport staff တွေ စားတဲ့ စားသောက်ဆိုင် တစ်ခုရှိတယ်..အပေါ်ဆိုင်တွေ ထက်စာရင် ဈေးသက်သာတယ်…
underground floor က airport staff တွေ စားတဲ့ စားသောက်ဆိုင် ကို ဘယ်နေရာက သွားရလဲ မသိဘူး ကျွန်တော်တော့ မရောက်လိုက်ရဘူး
မြန်မာမှာလဲကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးတခုရှိပါတယ်
သူများခြံထဲသွား သူများအိမ်ခမ်းနားတာတွေ မြင်ပြီး ကိုယ့်အိမ်လေးကိုလည်း လှစေချင်တယ်ပေါ့။ မမှီလည်း အရင်တုန်းက သြော်..တို့အိမ်လေးမှာ အသစ်တွေပဲ လှလိုက်တာလို့ သူများအိမ် မရောက်ဘူးလို့ ဟုတ်လှပြီ ထင်တာ သူများအိမ် သွားလည်တော့မှ ပါးစပ် မပိတ်နိုင်ဘူး အံ့သြလွန်းလို့။ အဲ့တော့မှ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ငါ့အိုင် အကြီးဆုံးလို့ ထင်နေတဲ့ နွားခြေရာခွက်ထဲက ဖားမှန်းသိတော့တယ်။ ရှယ်ပေးလို့ ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် တနေ့ကြရင် ကျေးဇူးဆပ်ပါဦးမယ် နိုဇိုမီ သိချင်တာတွေနဲ့ပါ။
မမှီ တင်မဲ့ပို့စ် ကိုစောင့်ဖတ်နေပါမယ်
မမှီ သားလေး ကို အဲဒီမှာ ကျောင်းထားလို့ မြန်မာ စာမေးပွဲ ဖြေဘို့ဆို ကိုယ်တိုင် စာသင်ရမယ်ထင်တယ်
နိုဇိုမိ ကတော့ တော်တော် စေ့စပ်ပြီး သေချာ လုပ်တတ်တဲ့ လူထဲမှာ ပါတယ်။
ဆူး ကတော့ တချို့ကိစ္စတွေ သိပေမဲ့ ပြန်ပြီး စနစ်တကျ မရေးပြနိုင်သေးဘူး။ အဓိက အကြောင်းအရင်းက စိတ်မရှည်လို့ ဇတ်လမ်းတခု ရေးရင်တောင် အဖျားရှူးတတ်တယ်။ စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ရေးတာကို တကယ် ချီးကျူးပါတယ်။
စလုံးလေဆိပ်မှာတော့ ခြေထောက် အနိပ်ခံစက်တွေ အရင်က တွေ့မိတယ် အခုတော့ ရှိသေးလား မရှိတော့ဘူးလားတောင် သတိမထားမိတော့ဘူး ဒါမျိုးကလည်း အချိန်ရမှာ ဇိမ်ယူလို့ ရတာ.. အလကားရတဲ့ အင်တာနက်ကိုတော့ ၁၅ မိနစ် သုံးတယ်။
မြန်မာပြည်က ပြည်ပ ထွက်ခွာ ဆိုလည်း အလကားရတဲ့ ဖုန်းနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ လှည့်နုတ်ဆက်လိုက်သေးတယ်။ အဲဒါ မြန်မာကွ.. ဟိဟိ.. အဲ.. ဒါ ဆူး… လို့ ပြောတာ..
ပြောရင်းနဲ့ အကျင့်တွေ လူတွေ သိကုန်တော့မှာပဲ..
စိတ်ဝင်စားတဲ့ ဟာ လုပ်ရတာမို့ စိတ်ရှည်တယ် ထင်မိတာပဲ ပို့စ်အတွက်ဆို အာရုံက အဲဒီထဲရောက်နေတယ် တခြားကိစ္စတွေမှာတော့ စိတ်မရှည်ပါဘူး
စင်ကာပူလေဆိပ် နဲ့ ပတ်သက်လို့ သတိရမိတာ တစ်ခုက ၂၀၀၄ စင်ကာပူကနေ တဆင့် ခရီးသွားတော့ စင်ကာပူလေဆိပ်ကို ရောက်တာက ညနေပိုင်း နောက်ခရီးက မနက် ၁ နာရီ
လောက်မှ သွားရမှာ အိပ်လို့ရတဲ့ ဒရင်းဘတ် လို ဟာမျိုး အများကြီး ချထားတာ တွေ့ဘူးတယ်
ခေါင်းအုံးက နှိုးစက်ပေးထားရင် ဗိုက်ဘရေတာနဲ့ နှိုးတယ် ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘန်ကောက်လဲ ထရန်စစ် ခရီးစဉ်တွေ ရှိတာပဲ ၊ ဒါပေမဲ့ အိပ်လို့ရတဲ့ နေရာတော့ မတွေ့မိဘူး
အဲဒါတွေကြောင့်ထင်ရဲ့ စင်ကာပူချန်ဂီ လေဆိပ်က ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး လေဆိပ်ဆု ရတာ ခဏခဏ ပဲ
really general knowledge pel thanks for post , i have been penan port only malay also beautiful
ဒီလောက်ထိ စေ့စေ့စပ်စပ် ဖော်ပြပေးနိုင်တာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျား။
ဒါမျိုးလေးတွေမြင်ရင် ကိုယ့်ဆီမှာလည်း အရမ်းမြင်ချင်တယ် အရမ်းဖြစ်ချင်တယ် မဝေးသောတနေ့မှာ မြင်နိုင်ဖို့ အားလုံးကိုယ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ၀ိုင်းရင် ၀န်းရင်ဖြင့် ဖြစ်လာမှာပါလေ။
မလေးရှား ကို ရှော့ပင်းထွက်ဖို့ အစီစဉ် ရှိလာခဲ့ရင်..
နိုဇိုမိ ရဲ့ ပို့ စ် ကို လာကူးမယ်နော် ။
အခုတော့ ဖတ်သွားရုံပေါ့ဗျာ ။
ရှင်ပြုတုန်းက ရွှေထီး ဆောင်းခဲ့တယ်ပေါ့ …
ခောတ်နဲ့ အမှီတော့ လုပ်သင့်ပါပြီ… ငွေရေးကြေးရေးအရ .. အဆင်ပြေအောင်လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ .. အခုဆိုရင် အရှေ့တောင်အာရှ အဆင့်မှီလောက်တဲ့ လေဆိပ်မျိုးလုပ်သင့် ပြီပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်လဲ ရောက်ခဲ့ပါတယ် အရှေ့တောင်အာရှမှာ အကြီးဆုံးလို့ သိရတာပဲ .. အကို့လောက် သေခြာမလေ့လာခဲ့ဘူး……
ကိုပေ ရှော့ပင် နဲ့ ဒုတိယအကြိမ် ဟန်းနီးမွန်း ပေါင်းထွက်ပေါ့
ရွာသားဖြစ်ရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူး လို့ ပြောရမှာပဲ ကိုတညင်သားရေ ကျွန်တော်တို့ ချစ်ခင်ရ တဲ့ ရွာသားတွေ ကြောင့် ကျွန်တော်တို့မှာ ဗဟုသုတတွေ သတင်းတွေ အသိဥာဏ်ပညာတွေ ရ ရတယ်
အဲဒါကြောင့် အခြေအနေပေးတာနဲ့ ကိုယ့်ရွာသားတွေကိုလဲ ပြန်ဝေမျှချင်တဲ့ စိတ်ကြောင့် ဂရုတစိုက်လေး ကြည့်မိခဲ့တာပါ
တိုင်းပြည်မှာ လူတဦးချင်းဝင်ငွေမြင့်လာရင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ ဝင်လာစီးပွားရေးလုပ်ကြ၊ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေပေးကြ၊ နိုင်ငံတကာကလည်း ငွေချေးကြနဲ့ အခုလို အခြေခံ၊ အဆင့်မြင့် အဆောက်အအုံတွေ ထွန်းကားလာတာပဲ။ မြန်မာပြည်မှာ တိုင်းပြည်ဓနဥစ္စာကို ပြည်သူများအကြား မျှမျှတတဝေခြမ်းမှု မရှိသေးသ၍ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကို အမှီလိုက်ဖို့ ဝေးနေအုံးပါမယ်။
တိုးတက်ချက်ကတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံက လေဆိပ်ထက် အများကြီးသာတယ်… လောလောဆယ်ပေါ့… နောင် နှစ် (၃၀) လောက်ဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုနေမယ်မသိဘူး…